अष्ट्रेलियाको सिड्नीवासीलाई चेतावनी
सिड्नी । केही महिना देखि अष्ट्रेलियाको बिभिन्न ठाउँहरुमा लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । उक्त डढेलोको प्रदूषण मुख्य शहर सिड्नीमा पनि फैलिएको छ । व्यापक रूपमा लागेको डढेलोका कारण धुवाँ र धुलोको मार सिड्नीवासीले खेप्नुपरेको छ । सिड्नीवासीले यसबारेमा अझै सचेत रहनुपर्ने भएको छ । विस्तृतमा
अष्ट्रेलियामा बसाईसराई निकै कठिन, अर्को राज्यमा जान चाहनेले के गर्ने ?
अष्ट्रेलियामा बालबालिकालाई गाडीमा एक्लै नछोड्न चेतावनी
अष्ट्रेलिया पुगेको छोरोले जब यसरी आफ्नो भविष्य आफै बर्बाद गर्यो
विदेश जाने विचारमा हुनुहन्छ, कुन देश जान ठीक ?
सिड्नी । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा अस्ट्रेलिया आयोजना हुने एक च्यारिटी कार्यक्रममा सहभागि हुन सिड्नी आउने भएका छन् । यही जनवरी १२ शनिवार हर्षभिलको माराना अडीटोरियममा हुने च्यारीटी डिनरमा नेता गगन थापा सहभागि हुन लागेका हुन् । काठमाण्डौ युथ अस्ट्रेलियाको आयोजनामा परोपकारी संस्था जीवन उत्थानको सहयोगार्थ सिड्नीमा च्यारीटी अर्थ संकलन कार्यक्रम हुन लागेको हो ।